Piper's Rise Foreword — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
यो अगाडि साँच्चै राम्रो छ र म पुस्तक पढ्न एक पटक मलाई आशा छ, प्रभु मा ठूलो लम्बाई र गहिरो गहिराइमा गर्न उदाउनु.
म निश्चित पुस्तक उदय पढ्न प्रतीक्षा खिचडी
अनुग्रह र शान्ति तपाईं यात्रा
म अब यो पढ्न चाहनुहुन्छ!
निकोलस theron क्षेत्र • जनवरी 26, 2015 मा 1:26 बजे • जवाफ
म त्यहाँ समय बर्बाद मा कुनै पनि बिन्दुमा छ सहमत. तर आफ्नो समय रमाइलो गर्न नबिर्स. मजा छैन खराब तपाईं रमाइलो यसको कस्तो छ. तपाईंले केही एक अरू दुखाइ आफ्नो खुशी प्राप्त गर्छन्. चोट र कोही चोरी गर्छ अरू तपाईं आनन्द र खुशी दिन. तल भगवान अर्को छोरा पकड गर्दैन. कि तपाईं ले बल दिनुहुन्छ. भनेर मानिस भावना दिनुहुन्छ. एक वास्तविक मानिस. गलत कारणहरूले कुराहरू आफ्नो जीवन फिक्सिंग छ बोझ वा भनेर अन्धो छोड्न. भगवान को अर्को छोरा बताइरहेका छैन प्रचार गलत हो. वा गाउन छैन. वा केही एक देखि चलिरहेको गर्ने आफ्नो आध्यात्मिक पैदल को गहिरो गाढा भागहरु मा तपाईंलाई मदत गर्न बल हुन सक्छ. आफ्नो गवाही. कारण के तपाईं जस्तै नजिक र दृढ परमेश्वरको पालना. हामी देवताहरूको योजना को गहिराई देख्न गर्नुभयो किनभने हामी बस चलाउन. हाम्रो जीवनमा वास्तविक चोट. यसो हुन्छ कहिल्यै कथा. परमेश्वरले हराएका लागि आए. यो भङ्ग. को डराएको. को दोषी. बौद्धिक छन् कि मन. तर लगातार तिनीहरूले राम्रो कुनै हो भन्नुभयो छन्. अब अन्तिम लागि आफ्नो सबै भन्दा राम्रो बचत नगर्नुहोस्. भगवान आउँदै छ. हामी मिति थाहा छैन सक्छ तर उहाँले आउँदै छ. र उहाँले प्रभु डर हुनेछ हामी सबै गर्छ जब उहाँले साँच्चै सही छ के थाह किनभने. उहाँले सबै भन्दा राम्रो छ के थाह. यसको समय परमेश्वरको आशीर्वाद जब म आफ्नो पुस्तक पढ्न.
नियुक्त यूहन्ना • जनवरी 27, 2015 मा 5:41 छु • जवाफ
वाह! यो वास्तवमा भयानक छ, म प्रतिलिपि लागि प्रतीक्षा गर्न सक्दैन. यात्रा, राज्यको आफ्नो सेवा अझ अनुग्रह र fruitfulness!
बर्टन • जनवरी 27, 2015 मा 4:53 बजे • जवाफ
म प्रतिलिपि लागि प्रतीक्षा गर्न सक्दैन मेरो ठाउँमा प्राप्त गर्न पूर्व-आदेश! तपाईं एक पुस्तक आफैलाई जस्तै युवा मदत लेखेर लागि यात्रा धन्यवाद.
उल्लेख: संगीत सोमवार – यात्रा ली द्वारा उठ्नेछ | सत्य मंत्रालय को खाँबो